Akụkọ - Graphite electrode market global report report
na ”amụma amụma graphite electrode na 2027 - mmetụta covid-19 na nyocha ụwa site na ụdị ngwaahịa (ike dị elu, ike dị elu, ike mgbe niile); Ngwa (eletriki aak oku, ladle oku, ndị ọzọ), na ọdịdị ala ”akụkọ agbakwunyere na researchandmarkets.com onyinye.
Ahịa ahịa dị na anyị ruru $ 6,564.2 nde na 2019 ma na-eme atụmatụ iru anyị $ 11,356.4 nde site na 2027;
A na-atụ anya itolite na cagr nke 9.9% site na 2020 ruo 2027.
graphite electrode bụ ihe dị mkpa maka imepụta nchara site na ọkụ eletrik (eaf). mgbe afọ ise siri ike nke afọ ise gasịrị, ọchịchọ electrode eserese bidoro na 2019, yana mmepụta igwe. ya na mba ụwa na-elekarị gburugburu ebe obibi anya na mba ndị mepere emepe na-enyekwu nchekwa, onye mbipụta akwụkwọ ahụ na-atụ anya na mmepe siri ike na mmepụta eaf nchara na ịchọpụta electrode site na 2020-2027.
The ahịa kwesịrị ịnọgide na-esika na mmachi graphite electrode ikike mgbakwunye.
Ugbu a, ahịa ụwa na-achịkwa mpaghara Asia pacific na-aza 58% nke ahịa ụwa ọnụ. elu ina maka graphite electrodes si mba ndị a na-eke na nkpoda elu na crude ígwè mmepụta. dịka nke otu nchara igwe ụwa, na 2018, china na japan mepụtara 928.3 na 104.3 nde tọn nke nchara nchara n'otu n'otu.
Na apac, ọkụ eletrik arc nwere nnukwu ọchịchọ n'ihi ịrị elu nchara nchara na mmụba nke ike ọkụ eletrik na china. Atụmatụ azụmaahịa na-eto eto nke ụlọ ọrụ dị iche iche na apac na-agba ume na uto na ahịa electrode graphite na mpaghara ahụ.
ọtụtụ ndị na-ebugharị ígwè dị na mpaghara ugwu america na-elekwasị anya na itinye ego na ọrụ mmepụta igwe. na Maachị 2019, ndị na-ebugharị ígwè n'ime anyị - gụnyere nzụlite siri ike inc., Anyị ígwè corp., na arcelormittal - nyekwara anyị $ 9.7 ijeri na mkpokọta iji mee ka ikike ha nwee ike igbo mkpa nke mba.